Yintoni umahluko phakathi DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
Uyazi njani ukuba imveliso yakho inokuyilungisa okanye iphinde ifumane ifayile yam eyonakeleyo?
Ndoyisakele ukulungisa ifayile yam kunye nemveliso yakho, ngoba?
Ndifumana ibug yemveliso yakho. Kwenziwe ntoni?
Ujonga njani ukuba ifayile yam inokuphinda ibuye ngokwam?
Ifayile yam ingaphaya kokuphola. Lithini icebo lam lokugqibela?
Ndifuna inqaku elingafumaneki kwimveliso yakho. Kwenziwe ntoni?
/ Ungayisombulula njani impazamo "yokwaphula umthetho"?
Ibha yenkqubela phambili ayitshintshi (okanye itshintshe kancinci) kwaye inkqubo iyaqina. Kwenziwe ntoni?
Ngaba kufuneka ndikhuphe ingxelo yedemo ngaphambi kokufaka ingxelo epheleleyo?
Uyikhupha njani isoftware yakho?
Uyintoni umahluko phakathi kwenguqulo yedemo kunye nohlobo olupheleleyo?
Ndingayisebenzisa ifayile esisigxina eveliswe yinguqulelo yedemo, emva kokufumana ingxelo epheleleyo?
Kufuneka wenze ntoni emva kokufumana ingxelo epheleleyo?
Ndingayisebenzisa isoftware yakho ukulungisa ifayile yeMac eyonakeleyo?
Ngaba ingxelo epheleleyo iya kuphinda ifumane idatha engaphezulu kunedemo?
Kuya kuthatha ixesha elingakanani kwinkqubo yakho yokulungisa ifayile yam?
Ungayiphucula njani imveliso yam?
Ifayile yam sele in.zip okanye.rar ifomathi. Ungayicinezela njani kwaye uyifihle kwakhona kwakhona ngoWinZip okanye PhumelelaRAR?
Ngaba inkqubo yakho iyasebenza kwiMacOS?
Ndingakwazi ukuvelisa isiseko sedatha kwiFomathi yama-95/97?
DataNumen Outlook Repair/ UkuTshintshiselana ngoTshintsho
Ndifumana impazamo "Kwimemori" xa kulungiswa iPST /OST ifayile. Kwenziwe ntoni?
Kutheni ndingafumani ii-imeyile ezifunwayo okanye ezinye izinto kwifayile ye-PST emiselweyo?
Kukho izinto ezingafunekiyo kwifayile yePST emiselweyo. Ungaziphelisa njani?
Ndifomatha idrayivu yam. Ndingaqhubeka nokufumana idatha yam ye-Outlook?
Kutheni imizimba yemiyalezo efunyenweyo ingenanto?
Yintoni umahluko phakathi DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Outlook Drive Recovery?
Yintoni umahluko phakathi DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Exchange Recovery?
Kutheni iphasiwedi efunyenweyo yahlukile kule ndiyisetileyo?
Indlela yokulungisa ukwahlulahlula zip ifayile?
Ungayilungisa njani indawo ebanzi zip ifayile?
Iyintoni intsingiselo yemeko enokuphinda ifumaneke kwingxelo yedemo?
Kutheni uninzi lwemihla yomhla kwindawo yogcino lwedatha elungisiweyo isetelwe ku-1900-01-01?
Kutheni ndingasakwazi ukuvula i-fixed DBF ifayile?
Ndihambise umfanekiso we-C yam: ukuqhuba. Ungayibuyisela njani kwakhona?
Ungawunyusa njani umfanekiso owenziwe ngu DataNumen Disk Image
U-odola njani uguqulelo olupheleleyo lwemveliso?
Kwenzeka ntoni emva kokuba ndithumele iodolo?
Andiyihlawuli irhafu. Ungayithintela njani irhafu yokuthengisa kwi-odolo yam?
Uyasinika isaphulelo kwezemfundo?
Uyibuyisela njani iodolo yam?
Ngaba iphepha-mvume lihlala likho?
Zingaphi iikhompyutha endinokuyifaka kwimveliso yakho?
Ndingayigqithisela ilayisensi kwenye ikhompyuter ndiye kwenye?
Ungayenza njani ilayisensi?
Ndinombuzo / ingxaki ngokubhekisele kwelinye lamanqaku ebhlog yakho. Kwenziwe ntoni?
Ngaba unokongeza i-backlink kwiwebhusayithi yam?
Umahluko kuphela phakathi kwezi mveliso zimbini kukuba basebenzise imithombo yolwazi eyahlukeneyo, ngolu hlobo lulandelayo:
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) ithatha ifayile yePST eyonakeleyo okanye eyonakeleyo njengedatha yomthombo.
· DataNumen Outlook Drive Recovery(DODR) ithatha idrive okanye idiski njengedatha yomthombo. Idrive okanye idiski yindawo apho ugcine khona iifayile zakho ze-PST kwixa elidlulileyo.
Ke ukuba unefayile yePST eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ngesandla, ungasebenzisa i-DOLKR ukulungisa le fayile kunye nokufumana ii-imeyile ngaphakathi kwifayile yePST. Ukuba i-DOLKR iyasilela ukubuyisa ii-imeyile ezifunekayo, usenalo ithuba lokufumana ezi imeyile, ngokusebenzisa iDODR ukuskena idrive / idiski apho ugcine khona ifayile yePST ngaphambili.
Okanye ukuba awunayo ifayile ye-PST esandleni, umzekelo, ufomatha yonke idiski / idrive, uyisusa umphelo ifayile yePST, okanye idiski / idiski yakho eyaphukileyo yaphukile kwaye awukwazi ukufikelela kwiifayile ze-PST kuyo, njl. , emva koko unokusebenzisa i-DODR ngqo.
Umahluko, disk, qhuba, ost, i-PST
Yabelana ngeli Nqaku:
Ngaba usabambekile? Singanceda njani?
Ukuhlaziywa ngoMeyi 17, 2021
Kutheni imizimba yemiyalezo efunyenweyo ingenanto?Yintoni umahluko phakathi DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Exchange Recovery?
DataNumen SQL Recovery 6.0 ikhutshwa ngoJuni 22, 2021